Dayax-gacmeedka: Kordhi Isbeddellada Wax-ku-iibsiga Kooxda ee Dukaankaaga Shopify | Martech Zone
Dayax-gacmeedka: Kordhi wax ka beddelashada kooxdu wax ku iibsanayso Dukaankaaga Shopify
Moonship wuxuu aaminsan yahay in mustaqbalka e-ganacsiga uu yahay mid bulsho, waxayna ku jiraan hadaf si ay awood ugu yeeshaan ganacsiyada nooc kasta ah inay si dadaal la'aan ah ugu koraan ereyga-af-af-afka. Shaki kuma jiro in saamaynta ugu fiican ee aad u leedahay alaabtaada ay tahay saaxiibka saaxiibka…
Dayax-gacmeedku waxa uu leeyahay 3 astaamood oo muhiim ah oo dhaqaajiya beddelka bulshada Soo iibso:
Tab-iib ka hor
Ku xooji wadaagga taraafikadaada hadda jira tab iibsad kooxeed. Iyada oo ay ku jirto raad yar iyo is dhexgalka aan kala go 'lahayn ee socdaalka iibka ka hor ee jira, waxa ay wadaa saamiyo iyo tixraac iyada oo aan la hurin khibradaada macmiilka ama astaantaada.
Hibada Iibka Kadib
Sii macaamiishaada qiimo dhimis si ay ula wadaagaan asxaabtooda isla markaaba iibsashada ka dib. Waxaad ka heli doontaa dhammaan faa'iidooyinka dalab kooxeed muuqaalkan, marka laga reebo in macaamiishu ay wadaagaan wanaagga qalbigooda halkii ay ka heli lahaayeen qiimo dhimis naftooda.
Soo Bandhigida Kooxda Smart
Aqoonso, bartilmaameed, oo beddel dukaamo badan oo xayndaab ku jira adiga oo siinaya fursad ay ku biiraan amar kooxeed dhacaysa. Kor u kaca heerarka beddelka ilaa 40% oo leh hal-laba feerka qiimo dhimis iyo caddayn bulsho wakhtiga ugu habboon.
Ku beddel muuqaalkayaga iyo dareenkayaga daqiiqado gudahood macaamiishaaduna ma ogaan doonaan halka summadaadu ku dhammaato iyo Dayax-raac bilaabmaa.
Qabso Demo ama Is-qor hadda!
Shaacinta: Waxaan ku xirnahay Dayax-raac oo waxaan adeegsanayaa xiriiriyeyaal ku xiran qodobkaan.
Tags: saaxiibo dhimiskoox iibsikooxdu waxay bixisaakordhinta siciradadayax-gacmeedHibada iibsashada boostadaqiimo dhimis iibsi horeganacsigadukaankakooxda smart waxay bixiyaaniibsashada bulshadaganacsiga bulshada
Telbee: Ka Qabo Farriimaha Codka Dhageystayaasha Podcast-kaaga